Tababare Pep Guardiola oo shaaca ka qaaday in ciyaarta Arsenal ay ka dhigan doonaan mid ay ugu diyaar garoobayaan kulanka Real Madrid – Gool FM
Tababare Pep Guardiola oo shaaca ka qaaday in ciyaarta Arsenal ay ka dhigan doonaan mid ay ugu diyaar garoobayaan kulanka Real Madrid
(Manchester) 28 Juun 2020. Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola waxa uu shaaca ka qaaday in kooxdiisa ay diiradda saareyso kulanka isugu dhimman Real Madrid lugta labaad ee wareegga 16-ka Champions League ee dhici doona bisha dambe.
Man City ayaa xalay iska xaadirisay wareegga afar dhammaadka FA Cup-ka, waxaana lagu aadiyey Arsenal, kaddib markii ay 2-0 kaga adkaadeen Newcastle United.
Macallinka Sky Blue ee Guardiola waxa uu sheegay in hammigiisu yahay in ciyaarta ay la leeyihiin Arsenal uu ka dhigto mid ay kaga sii shaqeynayaan niyadda iyo mooralka xiddigaha si ay Real Madrid qaab wanaagsan ugu wajahaan.
Hoggaamiyaha reer Spain ayaana yiri: “Waynu ka hadalnay wixii ka dhacay Premier League, waxaanu u baahanay labo guul oo dheeraad ah si aynu xisaab ahaan ugu baxno tartanka Champions, intaas kaddib waxaan ka hadlaynaa labo tartan oo aanu wali ku jirno oo aanu tallaabada koowaad samaynay.”
“Semi-finalka aan ka hor tegayno Arsenal, haddii aan nasiib yeelanno oo aan ciyaar wanaagsan soo bandhigno si aan u gaarno finalka, waxay noo noqon doontaa diyaar-garowga ugu wanaagsan ee inaanu koobka ugu guuleysanno, iskuguna diyaarinno kulanka Real Madrid.”
Real Madrid iyo Manchester City oo bishii Maarso ku ciyaaray garoonka Santiago Bernabeu ka hor intii aan ciyaaraha loo joojin Coronavirus, waxaana 1-2 ku soo adkaatay kooxda reer England, balse lugta labaad ayay labadan kooxood yeelan doonaan bisha Agoosto.
Kooxda Inter Milan oo doonaysa inay la wareegto Sergio Aguero & Xiddiga ay qeyb uga dhigayso heshiiska oo la ogaaday